ဝေဒနာရှင်ကို ပစ်ပယ်တဲ့လုပ်ရပ် လူကြီးလူကောင်းပီသလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဝေဒနာရှင်ကို ပစ်ပယ်တဲ့လုပ်ရပ် လူကြီးလူကောင်းပီသလား
ဝေဒနာရှင်ကို ပစ်ပယ်တဲ့လုပ်ရပ် လူကြီးလူကောင်းပီသလား
Posted by AKKO on Aug 4, 2011 in Health & Fitness | 25 comments
HIV & AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို လက်တွဲကူညီ စောင့်ရှောက်ကြပါ
ညနေခင်း တစ်ခုမှာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ဆေးခန်းဖွင့်ဖွင့်ချင်း … လူတစ်ယောက်ရှေ့က ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတာ တွေ့မိတယ် ။ ဆရာဝန်လာမလာ လာကြည့်တာပဲ အထင်နဲ့ စောင့်နေတဲ့ လူနာတွေကို ကုသပေးရင်း အမှူမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေလိုက်ပါတယ် ။ နောက်တစ်နာရီခွဲလောက်အကြာ … ထိုလူ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်တာ မြင်ရပြန်ပါရော … ကျွန်တော်လည်း သမရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အပြုမူဖြစ်လို့ သိချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် ။ ပထမတစ်ခါလမ်းလျှောက်တုန်းက ဆေးခန်းကို လာချောင်းတာလို့ နားလည်သော်လည်း အခုတစ်ခါလာချောင်းတာက ဘာလို့များပါလဲ သိချင်မိပါတယ် ။ လမ်းမှာမ လမ်းလျှောက်ပြီး ဆေးခန်းထဲ ကျီးကန်းတောင်းမှောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့လူကို ကျွန်တော်ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်နဲ့ ခေါ်မေးလို့မှ မရဘူးလေ ။
သူဆေးခန်းထဲချောင်းကြည့်ချိန် ရှာဖွေနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ပါ ။ ကျွန်တော့်အထင် သူ့အိမ်သားတစ်ဦးဦးများ လူနာအနေနဲ့ ဆေးခန်းထဲလာသလား ရှာချင်နေတယ်ထင်ပါတယ် ။ သိချင်စိတ်သိပ်မပြင်းပျတော့ပဲ ကျွန်တော့အလုပ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေခဲ့တယ် ။ ဆေးခန်းပိတ်ချိန်ရောက်တော့ လူနာတွေ အကုန်လည်းပြန်ရော ကျွန်တော် ကုန်သွားတဲ့ ဆေးစာရင်းနဲ့ နောက်ထပ်ဝယ်ရမဲ့ ပစ္စည်း၊ဆေးစာရင်း ၊ စတာတွေကို တွက်ချက်ပါတော့တယ် .. ။ အဲ့ဒီအချိန် တံခါးလေးကိုတော့ ဂျက်မထိုးပဲ ဟစိလေး ဖွင့်ထားပါတယ် ။ ကျွန်တော်စာရင်းတွက်တာ အလွန်ဆုံးကြာ ဆယ့်ငါးမိနစ်ပါပဲ … ဒါကြောင့်လည်း တံခါးလေးကို မပိတ်ပဲ ဖွင့်ထားတာပါ … ။ စာရင်းတွေ အကုန်ပြီးလို့ … သွားတော့မယ် ပြင်တော့မှ … ကျွန်တော့် ဖွင့်လျှက်သား တံခါးရှေ့မှာ မတ်တပ်လေး လာရပ်နေတဲ့လူက ကိုခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်ပါပဲ … ။ သူ့နာမည်ရင်း မသိလို့ အမည် တပ်လိုက်တာပါ ။
ညိုးငယ်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို တိုးတိုးလေး လှမ်းပြောပါတယ် ။ ဆေးခန်းပြချင်လို့ တဲ့ … ။ ကျွန်တော်လည်း ဆေးခန်းပိတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေသိမ်း ခုံတွေတောင် နေရာချပြီး ၊ သော့တွေလည်း ပိတ်ပြီးကုန်ပြီလေ ။ ကျွန်တော့ စာတမ်းတစ်ခုပြုစုဖို့အတွက် ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းထားတာ ဆေးခန်းပိတ်ချိန် သွားရမှာကြောင့် … သူ့ကို မနက်ဖြန်မှ လာပါလားလို့ အလွယ်ပဲပြောမိလိုက်ပါတယ် … ။ ဖျော့တော့တဲ့ လေသံလေးနဲ့…လူရှင်းအောင် စောင့်နေတာပါလို့ ပြန်ပြောတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်လျှော့ပြီး ပြန်မဲ့လူ မဟုတ်မှန်းသိခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အလွယ်ပြောလိုက်ပေမဲ့ … မျက်နှာလွဲပြီးမနေနိုင်တာကြောင့် သူ့ကို ကြည့်ပေးဖို့ …သဘောတူလိုက်ပါတယ် ။
ဆေးခန်းအတွင်းပိုင်းကို ၀င်ခိုင်းကာ စမ်းသပ်မှူပြုလုပ်စဉ် သူ့အကြောင်း အနည်းငယ်ကို ပြောပြပါတယ် … ။ ထိုလူက တစ်ချိန်က ခရီးသွားကားများ မောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ ကျန်းမာရေး အခြေနေမကောင်းလို့ …အလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲ အိမ်မှာ ထိုင်စားနေရတာပါတဲ့ ။ လေးစားဖို့ကောင်းတာ တစ်ခုက သူ့မှာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ကို မကွယ်မ၀ှက်ပဲ ရှင်းရှင်းပြောခဲ့ပါတယ် … ။ ထိုလူနဲ့ စကားပြောစဉ် ခဏတွင်း သူ့ဘ၀ တစိတ်တပိုင်းကို သိလိုက်ရပါတယ် … အေအိုင်ဒီအက် ရောဂါသည်တစ်ယောက်မို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်မကပဲ မိသားစုရဲ့ ပစ်ပယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကာ အထီးကျန် အဖြစ်နဲ့ သေမဲ့ရက် ထိုင်စောင့်နေရသူပါပဲ… ။ ကျွန်တော် သူ့စကားတွေကိုကြားရတော့ … ရင်ထဲနေလို့မကောင်းဘူး … ဟာတာတာနဲ့ စိတ်မကောင်းတာမျိုးလား သတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့ ဝေဒနာတစ်ခု ခံစားလိုက်ရပါတယ် ။ သူဆေးခန်းကို ဖွင့်ဖွင့်ချင်းလာလျှင် ဘယ်သူမှ မရှိဘူးထင်လို့ လာကြည့်တာဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ့ရောဂါအကြောင်း အတော်များများက သိကြကြောင်း သူ့ကြောင့် ဆေးခန်းမှာ လူမလာတော့မှာစိုးကြောင်း ၊ထို့ကြောင့် လူရှင်းချိန်အထိစောင့်နေရကြောင်းလည်း ပြောပြပါတယ်…ဒါအပြင် တခြား ဆေးခန်းတွေ ရောက်ခဲ့ဖူးကြောင်းနဲ့ … အရမ်းနွမ်းနယ်နေလို့ အကြောဆေးထိုးချင်တဲ့အခါ မထိုးပေးကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ် ။ နှင်လွတ်လို့ မကောင်းတတ်တာကြောင့် ကုသမှူပေးတဲ့အခါ … အသားကို ကိုင်တွယ်လျှင်တောင် လက်အိတ်စွပ်ကိုင်တွယ်ကြောင်းနဲ့ နှာခေါင်းစည်းပါ တပ်ထားကြောင်း မျက်ရည်ဝဲ၀ဲနဲ့ ပြောပြရှာပါတယ် … ။ သူ့အသံတွေက တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ပါ … ဖွင့်မပြောပေမဲ့ ဘယ်လောက်တောင် အထီးကျန်နေလဲ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပစ်ပယ်ခြင်းကို ခံရလဲ သိနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းအတော်ဖြစ်သွားတယ် … ဆရာဝန်ဆိုတာ အယုတ်အလတ် အမြတ်မရွှေးရောဂါရတဲ့ လူတွေကို ကုသပေးရမှာပါ ။ စိတ်ဓါတ်တန်းတူထားပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ကုသပေးပါမှ ဆေးစွမ်းထက်မှာပါ ။ ဟိုလူက ဟိုရောဂါရှိလို့ မကုချင်လို့မရပါဘူး… ။ ဒါဆိုရင် စိတ်ဓါတ်မမှန်တဲ့လူအမျိုးစားထဲ ပါသွားပါလိမ့်မယ် ။ ယခုတော့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်ကိုလည်း ၀တ်နည်းနဲ့ မညီ ဆက်ဆံတာတွေမြင်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
ဆရာဝန်ဆိုတာက သာမန်ပြည်သူတွေထက် အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ဘယ်လို ကူးလဲ ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်လဲ ၊ ဘယ်လို နေထိုင်လို့ရလဲဆိုတာတွေ ပိုပြီး တတ်သိနားလည် ထားပြီးပါပြီ ။ အသားချင်းထိယုံလောက်နဲ့ မကူး ၊ လေထဲက မကူးပါလျှက် မလိုအပ်ပဲ ကာကွယ်မှူတွေပြုလုပ်နေတဲ့ သူသွားဖူးတဲ့ ဆေးခန်းတွေကိုတော့ နားမလည်နိုင်တော့ဘူး ။ ဆေးထိုးမပေးတာကလည်း ဆေးထိုးအပ်က ကူးနိုင်တာကြောင့်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ဆေးထိုးအပ်ကို ကိုင်ရုံနဲ့ မကူးပါဘူး… ။ သွေးကနေတဆင့်ကူးတာ သိနေလျှက်နဲ့ အသဲမာတဲ့လူတွေပါပဲ … ။ ကျွန်တော်တော့ သနားလွန်းလို့ သူ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်း အကြောဆေးသွင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။ အားမငယ်ဖို့နဲ့ စိတ်ဓါတ်တတ်ကြွအောင် ခဏတာ စကားပြော အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ သူမပြန်ခင် မျက်ရည်ဝိုင်းနေသော မျက်လုံးများဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထပ်ထပ်ပြောသွားခဲ့တာ ကျွန်တော့မျက်လုံးထဲ ယနေ့ထိမထွက်တော့ပါဘူး ။
ကူးစက်ပုံကူးစက်နည်းနဲ့ နေထိုင်နည်း သိထားလျှင် ကြောက်စရာမလိုတဲ့ရောဂါဆိုးကြောင့် ရောဂါသည်တွေ ခွဲခြား နိမ့်ချ ဆက်ဆံတဲ့လုပ်ရပ်ကို တိုက်ဖျက်ချင်ပါတယ် ။ လူသားချင်း အတူတူ စာနာလက်တွဲပြီး သူတို့ အသက်ရှင်စဉ်တွင်းမှာ စိတ်အေးလက်အေး နေသွားလို့ရအောင် ပစ်ပယ်ခြင်းတွေ မပြုလုပ်ဖို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။ ။
media တွေကနေ အင်တိုက်အားတိုက် ဒီလောက် လှုပ်ရှားပြီး ကူးစက်နည်းတွေ ၊ ရှောင်ရန် ၊ ဆောင်ရန်တွေ ပြောပြနေတာတောင် … ဒီလို ပစ်ပယ်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေ ရှိသေးတာပဲ လား ။
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် လူတွေ သေရမှာကြောက်တာမို့ … ဒီရောဂါရှိတဲ့လူကို ပစ်ပယ်ထားခဲ့တာ … အဲ့ဒါကလည်း အရင်ကလွဲမှားတဲ့ အယူအဆကြောင့်ပါပဲ ။ တီဗွီမှာတောင် ပါလာနေတဲ့ … ကုရာနတ္တိဆေးမရှိဆိုတဲ့စာမျိုးကြောင့်လေ … ။ အခု ဆေးတွေ ပေါ်နေပါပြီ ပျောက်ကင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်လျှင်တောင် ဆေးမှန်မှန်စားပြီး ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီ ။ အဲ့ဒီအကြောင်းလေး … လျှန်းလျှန်းတောက် သိအောင် အင်ဖော်မေးရှင်းပေးနိုင်လျှင် ကောင်းမှာပါပဲ .. မီဒီယာတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ။
သူ့မှာရောဂါရှိတာက ရှိတာပဲလေ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်လဲ၇ှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ
ဒီလိုပစ်ပယ်ထားတော့ အားငယ်နေ၇ှာမှာပါ …
အခုလို ဆေးကုပေးပြီး အားတက်စေမယ့် စကားတွေပြောပေးတဲ့ AKKO
စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားမိပါတယ် ……
That mentioned patient should contact Thazin clinic (established by INGO) located at Hlaing Thar Yar. This clinic giving treatment for HIV/AIDS patients mainly.
It’s better to use essential IV form e.g. antibiotics , antifungal than IV glucose,B12, B6, and burplex in HIV seropositive patient, I think.
လွယ်လွယ်မကူးနိုင်ဘူး ဆိုတာ သိပေမဲ့ ကြောက်တာကတော့ ကြောက်ကြတယ်။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီရောဂါ ဖြစ်ပြီဆို ကဲလွန်းလို့ သောင်းကျန်းလို့ပဲ တထစ်ချ ပြောကြတာမို့ တော်ရုံလူကတော့ ရှောင်တာပါပဲ။ မီဒီယာတွေက ကောင်းကောင်း ပညာပေးနိုင်မှ ဒီလို စိတ်တွေ လျှော့နိုင်မယ် ထင်တာပဲ။
အေအိုင်ဒီအက်စ ကလေးငယ်တွေကို စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဂေဟာတစ်ခုကို ရောက်သွားဖူးတယ်။ ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကတော့ ကြောက်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီက ဆရာမတွေ ကလေးတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ထိန်းကျောင်းနေတာ တွေ့ရတော့ တော်တော်ချီးကျုးမိတယ်။
သေမှာကြောက်တာရော၊ နောက်တစ်ခုက ဒီမှာဒီလိုရောဂါဖြစ်ရင် များသောအားဖြင့်
လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဆိုပြီး အထင်သေးတတ်တာကြောင့် ကိုယ်ကမဟုတ်ဘဲ ကူးခံရမှာ ကြောက်ကြတယ်ထင်ပါတယ်
နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေက ပညာပြန်ပေးရမယ့်အပြင် လူနာကိုပစ်ပယ်တော့ ပိုဆိုးတာပေ့ါနော်
P zer says:
Shwe Ei ပြောတဲ့ သဇင် ဆေးခန်းမှာ ဆေးယူနေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ရှိပါတယ်…..ဆေးခန်းက ART ဆေးတွေ ကို စနစ်တကျဖြန့်ဝေပေးနေတာမှန်ပေမဲ့ အစောပိုင်းက Register လုပ်ထားတဲ့ သူတွေပဲ ဆေးရပြီး နောက်ပိုင်းလူနာတွေကို အစိုးရက သူတို့ တာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီး Project ကိုပါ လက်လွှဲ ယူသွားပါတယ်..ပြီးတော့ လူနာတွေကို ဝေဘာဂီဆေးရုံကို လွှတ်ပါတယ်။ ဝေဘာဂီက နပ်စ် တွေက လူနာတွေကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးဖို့ နေနေသာသာ “နင်တို့ဘာသာေ-ာက်ကမြင်းကြော ထလာပြီး ငါတို့ကို အလုပ်လာရှုပ်တယ် ” ဆိုပြီး အော်ဟောက်နေသေးတာတဲ့။ဒါပေမဲ့ လူနာသစ်တွေ အတွက်လဲ “သဇင်” က စီစဉ်ပေးတာလေးတွေ ရှိနိုင်တာမို့ သွားကြည့်လိုက်တာတော့ မမှားပါဘူး။
အဲ့ဒီဆေးတွေကလည်း အခမဲ့ဖြန့်ဝေတယ်လို့ ပြောပေမဲ့ … လူဦးရေ များလာတဲ့အခါ လုံလုံလောက်လောက် ဖြန့်ဝေ ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ … ။ ဒီရောဂါဟာ ဆေးမသောက်ပဲ တရက်ခွဲပျက်ကွက်လျှင်တောင် ဆေးယဉ်ပါးမှူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် … ဆေးရှိတာတောင် အလွန် သတိထားပြီး သောက်ရမဲ့ ဆေးမျိုးပါ … ။ ဆေးယဉ်လျှင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ … ဆေးမတိုးတော့ ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားမှူကို မဟန့်တားနိုင်တော့ပဲ ရှောဘရားသားဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ။
ပိုးရှိတိုင်း ဆေးသောက်ရမှာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ … နားလည်တတ်သိသူတွေက သေချာ စစ်ဆေးပြီး … သောက်သင့်တဲ့အချိန်မှ စသောက်ရမှာ … ။ ဆေးသောက်ပြီးလျှင် ပျက်ကွက်လို့ မရနိုင်တာကြောင့်ပါပဲ … ။
အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးတာ မှန်ပေမဲ့ ချက်ချင်း ART ကို တန်းပြီးပေးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး..
လူနာတွေကို ဆေးသောက်ချိန်တိကျဖို့၊ ပေးထားတဲ့ ဆေးအလုံးရေကို မှန်မှန်ကန်ကန်သောက်တတ်ဖို့ART မဟုတ်တဲ့အခြား ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ အချိန် တစ်နှစ်လောက်ယူပြီး လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်…ဒီကြားထဲမှာ ဆေးခန်းကို Check Up မှန်မှန်သွားရသလို ဆေးခန်းက ၀န်ထမ်းတွေကိုလဲ အိမ်တိုင်ရာရောက် လွှတ်ပြီး စစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်….လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ညွှန်ကြားချက်တွေကို သေချာလိုက်နာလို့ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရှိတဲ့ လူနာများကိုသာ ART ဆေးကို ပေးပါတယ်.ဆေးကို အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းဆုံးတစ်လစာကနေ အများဆုံး ၃ လစာ အထိပဲ လူနာတွေကိုပေးလိုက်တာပါ…ကြားထဲမှာလဲ သွေးဖောက်တာ၊ CD4 စစ်တာတွေကို ပုံမှန်လုပ်ပေးသွားပါတယ်..ဆေးယဉ်ပါးမှု အတတ်နိုင်ဆုံး နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်…ဆေးသောက်ရတဲ့သူတွေဟာ မသောက်ရတဲ့သူနဲ့ ယှဉ်ရင် သိသိသာသာ အသက်ပိုရှည်ကြပါတယ်…
AKKO လို စိတ်ဓါတ် ပြည့်ဝ တဲ့ ဆရာဝန်တွေ မြန်ပြည်မှာ များများ ရှိ လာပါစေ။
လိုလူတွေ အများကြီးပေါ်လာပါစေ သူတို့လိုအားငယ်ပြီနေရတော
ဟုတ်ကဲ့၊ P zer ပြောသလို သွားကြည့်လ်ို့ရအောင် လိပ်စာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရွှေရင်အေး ဈေးအနီး၊ ဘိုအောင်ကျော်လမ်း
နံနက် ၉း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီ
အထီးကျန်နေသူ လူမမာ ဝေဒနာရှင်အားလုံးအတွက် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးရာ
အရှင်းပျောက်တဲ့ဆေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတယ်နော်.. အခုလို တရင်းတနှီးနဲ့ အားပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်လိုမျိုး နောက်ထပ်ဆရာဝန်တွေ အများကြီးရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံမှာက အဲလိုဆရာဝန်တွေ ရှားတယ်.. အကုန်လုံးလိုလိုက ပိုက်ဆံကြည့်ကြတာများတယ်..
AIDS ဝေဒနာ ရှင် တစ်ဦး သောက်ရမယ့် တစ်ရက်စာ ဆေးတန်ဘိုး ဟာ ၉၀၀ကျပ် မပြည့်ဘူး လို့ သိရပါတယ် ။ ဒီအတွက် အလှူငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းဖို့နှိုးဆော်စာလေးကို လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ ပတ် က ထွက်တဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင် မှာ ဖတ်မိခဲ့ရပါတယ် ။ ( ဂျာနယ် နာမည် မမှတ်မိတာကို ခွင့်လွှတ်ပါ ) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် AKKO ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထား စေတနာလုပ်ရပ် ကို သိရှိရတဲ့ အတွက် လေးစားမိပါတယ် ။ AIDS ရောဂါ ဟာ လိင်ကိစ္စ သောင်းကျန်းမှ ဖြစ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူတွေ မှာ ဆေးထိုးအပ် အတူ သုံးစွဲ ရာ ကနေ လည်း ကူးစက်နိုင်ကြောင်း ၊ ထို့ အပြင် အခြား ကူးစက် နိုင်တဲ့ နည်းလည်းလေး တွေ ကိုလည်း ပညာပေးပို့ စ်လေး ရေးပေးပါဦးလို့ တောင်းဆို ပါရစေနော် ။
အဲ့ဒီ သတင်းလေး ပြန်တွေ့လျှင် တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ် ။
HIV & AIDS နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကူးစက်နိုင်တဲ့နည်းလေးတွေ လည်း အလျှင်းသင့်သလို ရေးဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
သူ့စိတ်က သူ့ကိုယ်သူ သိမ်ငယ်နေတာကြောင့် အဲလိုတွေပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်….
ပြောတာတော့ လွယ်တယ်၊ လက်တွေ့ ဆက်ဆံရရင်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူးနော်။ ကျနောလဲ လက်တွေ့မြင်ဖူးပါတယ်။ ထမ်းစဉ်ပေါ်မှာ ပက်လက်လေး။ တကိုယ်လုံးမှာ အနာပရပွနဲ့၊ အပေါ်က ပိတ်စလေးဖုံးပေးထားရတယ်။ ရေချိုးတဲ့အခါ အဆောင်အပြင်ကိုထုတ်ပြီး ရေလောင်းပေးတယ်။ သဂျီးတို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ ၂၁ရာစု သက်တမ်းရာထောင်ချီမဲ့ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲက အချိန်မတိုင်မှီ သေမဲ့ရက်ကိုစောင့်နေရတဲ့ လူသားတဦးပေါ့ဗျာ။
ဘယ်လောက်ပဲ ပညာပေးပေးအကြောက်တရားကို အရင်းခံပြီး ကြည့်တော့ ကြောက်ကြတာပါပဲ။ တခြားမကြည့်နဲ့ ဘွဲ့ရပြီးသား ကျွန်တော် အသိတစ်ယောက်တောင် ခုထက်ထိ HIV ရောဂါသည်မိခင်ကမွေးတဲ့ကလေးမှာ HIV ပိုးသေချာပေါက်ပါမယ်လို့ပြောနေတုန်းပဲ။
မိခင်ကနေ ကလေးကို ကူးစက်နှုန်း ၂၀% ကနေ ၃၀% ထိ ရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ … ကလေးရဲ့ ကံလည်းပါပါတယ် … ။ မိခင် နို့ထွက်တဲ့အချိန် ပိုးရှိတဲ့ မိခင်ဆီက နို့လည်း သောက်ရပေမဲ့ … မကူးစက်အောင် ဆေးဝါးတွေနဲ့ စနစ်တကျ ကြိုးစားကြတဲ့အခါ … ကူးစက်မခံရတဲ့အဖြစ် တကယ့်ကို ရှိခဲ့တယ် … ။